iPort: iPad Wireless Case Charging ary Mijoro | Vaovao IPhone
Rehefa te hividy tranga ho an'ny iPad izahay diaManana safidy maromaro isika: miaraka amin'ny fitendry na tsy misy fitendry. iPort dia mitondra tranga hafa amintsika, izay ankoatry ny fiarovana ny iPad, mamela antsika ihany koa andao hofenoina ilay fitaovana nefa tsy mampiasa tariby.
Ny raharaha iPort mifanaraka amin'ny fonon-tànana amin'ny iPad-tsikaNa inona na inona ny maodely: iPad Air, iPad iPad faha-4 na iPad mini Retina. Milamina tsara izany rehetra izany, fa ... ahoana no andoavana tsy misy tariby? Eny, tena tsotra: miaraka amina fotony izay mamela antsika hampiasa ilay fitaovana mandritra ny famerenany ihany koa.
Manana ilay fonony mpampitohy roa amin'ny famandrihana amina toerana mijidina ary olona roa hafa hampakatra azy amin'ny toerana marindrano. Ireo mpampifandray ireo dia misambotra ny fanohanana amin'ny famonoana.
Ny fanohanana entana dia mamela antsika apetraho amin'ny toerana telo ny iPad samy hafa, na ho an'ny fanoratana, na hijerena horonantsary na hamakiana ary ho fampiasana FaceTime.
Miaraka amin'ny holster ary mijoro koa misy charger 12w tonga Izany dia hahafahantsika mampandoa haingana kokoa ny iPad Mini antsika, satria 5w fotsiny ny charger miaraka amin'ity fitaovana ity rehefa mividy azy isika. Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny faran'ny fonony dia tsara loatra ka mamela antsika hampiasa ny Cover Smart izay ananantsika.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ity tranga ity, ankoatry ny fiarovana ny fitaovantsika amin'ny mety hianjera, dia misy koa lavaka ao amin'ny tapany ambany izay ampitomboina ny feon'ny fitaovantsika.
Ny haben'ny mpihazona iPort dia mety ho an'ny kapoaka, noho izany tsy dia misy dikany ny habaka iainany raha oharina amin'ny habaka izay azon'ny iPad hipetrahana eo ambony latabatra rehefa mandoa vola.
Fanazavana fanampiny - 'VersaKeyboard' ny tranga izay mitondra ny zavatra ilainao amin'ny iPad Air
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPort: iPad ary tranga mijanona tsy misy tariby